मुख्य Archives - Page 114 of 135
काँग्रेसले सरकार पनि नछोड्ने र बाम गठबन्धन कसरी फुटाउने भन्ने खेल खेल्दै – नेम्वाङ
काठमाडौं । नेकपा एमाले नेता प्रभावशाली सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले काँग्रेसले सरकार पनि नछोड्ने र बाम गठबन्धन कसरी फुटाउने भन्ने खेलमा मात्र लागेको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कांग्रेस नेताहरुले पछिल्लो समयमा दिइरहेका अभिव्यक्तिले …
सिद्धबाबामा कुहिरे भीरबाट ठूलो ढुंगा खस्दा बुटवल-पाल्पा सडकखण्ड अबरुद्ध
काठमाडौँ । सिद्धबाबा नजिकै सडकमाथिको भिरबाट ठूलो ढुँगा खस्दा बुटवल-पाल्पा सडकखण्डको सडक अबरुद्ध भएको छ । सडकमा ढुँगा खसेर कुनै पनि मानवीय क्षेती नभए पनि पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची जाने यात्रु तथा ति …
दाङ, २९ पुस । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दाङमा ५ नं प्रदेशको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तथा मुख्य निर्वाचन अधिकृत हेमन्त …
नगदसहित जुवाखालाभाट पक्राउ छ जुवाडे
इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिका–२० तरहरा क्षेत्रमा रहेको काबेली होटलमा गए राति जुवा तास खेलिरहेको अवस्थामा रु ७६ हजार नगद र चार बुङ ताससहित छ जनालाई रंगेहात पक्राउ गरिएको छ । …
स्कारपियो जिप सडकबाट झन्डै ८ सय तल खोलामा खस्दा एक जानको मृत्यु, एक घाइते
काठमाडौँ । धादिङको थाक्रे गाउँपालिका ५ स्थित दामेचाैरमा शनिबार एउटा स्कारपियो जीप दुर्घटना हुँदा एक जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको छ भने एक जना घाइते भएका छन्। चितवनबाट काठमाडौँ तर्फ जाँदै गरेको बा …
काठमाडौ । त्रिवी शिक्षण अस्पताल प्रा. डा. गोविन्द केसीलाई अदालतको मानहानी गरेको भन्दै पक्राऊ गरेपछि एकाएक ठुलो विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली रजिनामा दिने सोचमा पुगेको बुझिएको छ। अहिले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधिकारिकता …
३० किलोको माला लगाएकोमा प्रचण्डप्रति बाबुरामले गरे यस्तो कडा व्यङ्ग्य प्रहार ( ट्वीटसहित )
काठमाडौँ । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले ३० किलोको माला लगाएको प्रसङ्गप्रति निकै व्यंग्यात्मक शैलीमा टिप्पणी गर्दै कटाक्ष गरेका छन्। सामाजिक संजाल …
जुम्ला – मोटरसाइकलको ठक्करबाट घाइते भएकी चन्दननाथ–९ तलिउम गाउँकी ४० वर्षीया नरकली गिरीको उपचारको क्रममा शुक्रबार मृत्यु भएको छ । उनलाई बुधबार नेपाल दूरसञ्चार शाखा कार्यालय जुम्ला अघि क १ प …
काठमाडौँ, २८ पुस । अनसनरत डा गोविन्द केसीले अन्तत सनिबार सरकारसँग ५ बुँदे सहमति गर्दै अनसन तोडेका छन् । केसीले त्रिवि शिक्षण अस्पताल अगाडि पच्चीस वर्षदेखि जुत्ता सिउँदै आएका सिरहाका सिलाउने नथुनिया मोचीको हातबाट जुस …
अन्तत तोडियो डा. केसीको अनसन: सरकारसँग भयो यस्तो ५ बुँदे सहमति [ सहमतिपत्रसहित]
काठमाडौँ, २८ पुस । अनसनरत डा गोविन्द केसीले अन्तत सनिबार सरकारसँग ५ बुँदे सहमति गर्दै अनसन तोडेका छन् । केसीले शिक्षण अस्पताल अगाडि पच्चीस वर्षदेखि जुत्ता सिउँदै आएका सिरहाका सिलाउने नथुनिया मोचीको हातबाट जुस पिई अनसन …